Nagarik Shukrabar - यौन रोग रोग्न कन्डोम
शनिबार, २३ बैशाख २०७४, १२ : ३३ | शुक्रवार , Kathmandu
यौन रोग कति किसिमका हुन्छन् ? यौन रोगबाट बच्ने उपाय के होला ?
हाम्रो समाजमा यौन खुला बहस र कुराकानीको विषय हुन सकेको छैन । त्यस्तै, यौन रोगबारे पनि पर्याप्त जनचेतना सञ्चार भएको छैन । लाज र डरका कारण यौन रोग लुकाउने चलन छ । सुरुमै उपचार गरे सजिलै निको हुने यौन रोग लुकाउँदा त्यसको परिणाम भयावह हुन्छ र बिरामीले असाध्यै सकस पाउँछ ।
यौन रोग भनेको यौन सम्पर्कबाट सर्ने संक्रामक रोग हो । नेपालीहरूमा देखिने मुख्य सरुवा रोगमध्ये यौन रोग पनि एक हो । कुनै यौन रोगको उपचार गर्न सकिन्छ भने कुनैको सकिँदैन । यसबाट बच्ने सहज उपाय भनेको यसको रोकथाम नै हो । यौन रोगबारे यथार्थ जानकारी भए हामी यसबाट सजिलै बच्न सक्छौँ । असुरक्षित सम्पर्कबाट यौन रोग सर्न सक्छ । यौन रोग लागेको व्यक्तिमा यसको लक्षण देखिन पनि सक्छ, नदेखिन पनि सक्छ । यौन रोगले शरीरलाई धेरै हानि पु¥याउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा यौन रोगले मृत्युको मुखमा पनि पु¥याउँछ । यौन रोग भएको व्यक्तिले छाला, गुप्तांग, मुख, मलाशय वा शरीरको तरल पदार्थद्वारा अरूलाई सार्न सक्छ ।
योनिबाट गन्हाउने पानी बग्नु, गुप्तांग चिलाउनु या दुख्नु आदि यौन रोगका लक्षण हुन् । समयमै उपचार गरी रोगलाई नराम्रो रूप लिन दिनुहुन्न । ब्याक्टेरिया, भाइरस या फंगसजस्ता जीवाणुले यौन रोग गराउन सक्छन् । ब्याक्टेरिया र फंगसद्वारा हुने यौन रोगको एन्टिबायोटिक र एन्टिफंगल औषधिले उपचार गर्न सकिन्छ । भाइरसलाई ठीक पार्न सकिँदैन तर यसका लक्षणको उपचार भने गर्न सकिन्छ । गर्भावस्थामा यौन रोग भएमा यसले बच्चालाई पनि नोक्सान पु¥याउन सक्छ । गोनोरिया र क्लामिडियाजस्ता यौन रोगले गर्भमा रहेको बच्चाको आँखामा असर पार्न सक्छन् । गर्भवती महिलालाई सिफिलिस (भिरंगी) भएमा गर्भपात हुने खतरा हुन्छ । त्यस्तै, गर्भवती महिलालाई एचआईभी छ भने गर्भको बच्चालाई एचआईभी सर्न सक्छ ।
गुप्तांगबाट स्राव हुने, पिसाब फेर्दा दुख्ने, गुप्तांग चिलाउने या सुन्निने, महिलाको तल्लो पेट दुख्ने, योनिबाट रगत जाने आदि लक्षण देखिएमा तुरुन्त चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ । दम्पतीले नै औषधि–उपचार गर्नु ठीक हुन्छ । यौन रोगको उपचार गरिरहेको बेला सकेसम्म शारीरिक सम्पर्क गर्नुहुँदैन । यस्ता यौन रोगको उपचार गरिएन भने पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज हुन सक्छ जसले महिलाको पाठेघरमा संक्रमण गर्नुका साथै बाँझोपन पनि गराउन सक्छ ।
सबैभन्दा बढी देखिने यौन रोग हो, ह्युमन पापिलोमाभाइरस (एचपीभी) । अहिलेसम्म १ सय ११ भन्दा बढी प्रकारका एचपीभी भाइरस पत्ता लागेका छन् । एचपीभी संक्रमणका खासै लक्षण देखिँदैनन् । तर, कुनै–कुनै संक्रमणमा महिला र पुरुषका गुप्तांगमा मुसा देखिन सक्छन् । कहिलेकाहीँ मुसा आफँै हराएर जान्छन् । हराएनन् भने यसका विभिन्न उपचार छन् तर मुसा गए पनि एचभीपी भाइरस वर्षाैंसम्म कुनै लक्षण नदेखाई शरीरमा रहिरहन सक्छन् । कुनै–कुनै एचभीपी भाइरसले मलद्वार, योनि, लिंग आदिको क्यान्सर पनि गराउन सक्छन् । हाल यो भाइरसका दुई भ्याक्सिन उपलब्ध छन् । यी भ्याक्सिन छ महिनाभित्र तीन वटा लगाउनुपर्छ ।
यौनजन्य रोग धेरै छन् । यौन रोगबाट बच्ने एक मात्र उपाय भनेको सुरक्षित सम्पर्क नै हो । यसका लागि कन्डोम सबैभन्दा उपयुक्त साधन हो । खासमा, जथाभावी यौन सम्पर्क नगर्नु नै यौन रोगबाट बच्ने सबैभन्दा असल उपाय हो । परहेज गर्नुभयो भने तपाईं यौन रोगको खतराबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
म १६ वर्षीय किशोर हुँ । राति निदाएका बेला मेरो लिंग उत्तेजित भएर वीर्य निस्कन्छ । यसरी वीर्य निस्केपछि कमजोरी फिल हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
युवावस्थामा महिला तथा पुरुषलाई स्वप्नदोषले अलमलमा पारेको हुन्छ । यसलाई रोग, कमजोरी या शारीरिक दोषका रूपमा बुझेर भ्रमित हुने धेरै छन् । तर, यो युवावस्थाको अत्यन्तै स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
युवावस्थामा शरीरको विकाससँगै हार्मोन र सोचाईहरू पनि फेरबदल हुन्छन् । विपरीत लिंगीप्रतिको तीव्र आकर्षणले व्यक्तिको मनोदशा विशेष खालको हुन्छ । र, ऊ विभिन्न मानसिक तथा शारीरिक अवस्थाबाट गुज्रन्छ । त्यस्तै, अवस्थामध्ये एक हो, स्वप्नदोष जसलाई अंग्रेजीमा नाइटफल या वेट ड्रिम्स भनिन्छ । राति सुतेको बेला कुनै सपना देखेपछि पुरुषहरूमा लिंग उत्तेजित भई वीर्य बाहिर आउने र महिलाहरूमा योनिरस पैदा हुने अवस्थालाई स्वप्न दोष भनिन्छ । यो युवावस्थामा हुने स्वाभाविक र प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यो प्रायः १३÷१४ वर्षको उमेरमा सुरु हुन्छ भने १८ देखि २१ वर्षको उमेरमा सबैभन्दा बढी हुन्छ । उसो त प्रौढ महिला र पुरुषहरूलाई पनि स्वप्नदोष हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा स्वप्नदोषसम्बन्धी केही भ्रमात्मक धारणा छन् । फलस्वरूप यस्तो सधैँ भइरहँदा व्यक्तिको मनमा शंका र डर उत्पन्न हुन्छ । स्वप्नदोष भएपछि टाउको दुख्छ, रिंगटा लाग्छ, शरीर कमजोर हुन्छ, बसेर उठ्दा आँखामा अँध्यारो छाउँछ, कम्मर दुख्छ, मन चञ्चल हुन्छ, काममा मन लाग्दैन, स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ, आँखा कमजोर हुन्छ भन्नेजस्ता भ्रमपूर्ण धारणाले स्वप्नदोषलाई दोषका रूपमा लिने गरिएको छ ।
स्वप्नदोष आफैँमा कुनै दोष होइन । तर, यो शब्द नै नकारात्मक सन्देश दिने खालको छ । दोष भनेको त्रुटि या कमजोरी हो । सपनामा यौन क्रियाकलाप गरेको देखेर स्खलित हुनु त आनन्दको विषय हो । स्वप्नदोषका बारेमा भ्रम फैलाउन हलुका यौन साहित्य र यौनसम्बन्धी लेख पनि जिम्मेवार छन् ।
स्वप्नदोष एकदमै सामान्य र यौनप्रतिको हाम्रो शरीरको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । पुरुष र महिला दुवैले स्वप्नदोषको अनुभव गरेका हुन्छन् । फरक यति हो, महिलामा पुरुषको जस्तो वीर्य स्खलन हुँदैन । स्वप्नदोष न कुनै रोग हो, न कुनै कमजोरी । यसले यौनका मामिलामा व्यक्तिलाई कमजोर बनाउँदैन । स्वप्नदोष भयो भन्दैमा हीनताबोध पालेर बस्नेहरूको कमी छैन ।
पुरुषहरू बिहान उठ्ने बेलामा लगाएको लुगामा चिल्लो र चिसो अनुभूति हुँदा मात्र स्वप्नदोष भएको थाहा पाउँछन् । महिलाहरूमा स्वप्नदोष हुँदा योनिमा गिलोपना हुनुबाहेक अरू केही पनि हँुदैन । त्यसकारण उनीहरू स्वप्नदोष भएको राम्ररी थाहा पाउँदैनन् । यसले पुरुषभन्दा महिलालाई स्वप्नदोष कम हुने गलत मान्यता बनाइदिएको छ । तर, सत्य के हो भने पुरुष र महिला दुवैलाई बराबर स्वप्नदोष हुन्छ ।
स्वप्नदोष प्रायः सुतेको अवस्थामा हुन्छ । निद्राका दुई अवस्था हुन्छन् । तीमध्ये एक हो– रेपिड आई मुभमेन्ट । निद्राको यही अवस्थामा स्वप्नदोष हुन्छ, किनभने यस अवस्थामा लिंगमा उत्तेजना आउँछ र सपना पनि बढी देखिन्छन् ।
तर, धेरै स्वप्नदोष हुनु राम्रो होइन । यसका धेरै कारण हुन सक्छन् । जस्तो, सेक्सका बारेमा मात्रै सोचेर बस्नु, उपयोगी काम नगरी खाली बस्नु, अश्लील फिल्म हेर्नु या अश्लील उपन्यास पढ्नु, श्रम नगर्नु आदि । स्वप्नदोष अत्यधिक भएमा चिकित्सकसँग उचित सल्लाह गर्नुपर्छ ।